७ वर्षका बालक फोर्ब्सको धेरै कमाउनेहरुको सुचीमा
२०७५ मङ्सिर २३ आइतबार, काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल केवल मनोरञ्जन गर्ने माध्यम मात्र होइन, यो आम्दानीको पनि राम्रो माध्यम बन्न पुगेको छ । यस्तोमा सामाजिक सञ्जाल युट्युबमा पनि यस्ता धेरै प्रतिभाहरु सुपरस्टार बनेका छन् । साथै उनीहरुले उल्लेख्य रकम पनि आम्दानी गर्ने गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
७ वर्षका बालकले भिडियो बनाएर कमाए करोडौं रकम, खेल्ने उमेरमा बेच्दै छन् खेलौना
भिडियोमा सुन्नुहोस् म‌ंगल ग्रहमा यसरी चल्छ हावा, गति कति ?
२०७५ मङ्सिर २२ शनिबार, काठमाडौं । बैज्ञानिकहरुले यो पत्ता लगाएका छन् कि मंगल ग्रहमा पनि हावा चल्छ । यो कुरा कुनै सानोतिनो बैज्ञानिक संस्थाले भनेको कुरा होईन । ... बाँकी अंश»
गुगलको जागीरबाट राजीनामा दिएर समोसा बेच्दै
२०७५ मङ्सिर २१ शुक्रबार, काठमाडौं । गुगलको जागीर छोडेर मुनाफ कापडिया समोसा बेच्न थालेका छन् । कापडियाले गुगलको जागीरबाट राजीनामा दिएर समोसा बेच्न थालेका हुन् । मुनाफले यो निर्णय कुनै दवावमा नभएर आफ्नो इच्छाले लिएका हुन् । अब उनको बार्षिक कमई डिग्री सकेका मानिसहरुको भन्दा ज्यादा रहेको छ । ... बाँकी अंश»
डेढ महिनादेखि रोकिएपछि नायिका तनाबमा
२०७५ मङ्सिर २१ शुक्रबार, काठमाडौं । धर्मको नाममा धर्मकै बदनाम गर्नेहरुको कथालाई लिएर निर्माण भएको चलचित्र जय श्रीदामको ट्रेलर सार्वजनीक भएको छ । धर्मको आडमा विकृतिको जड बनेका धर्मभीरुहरुलाई नै बार्गेनिङ गर्ने युवाको कथा समेत जय श्रीदाममा समेटिएको छ । ट्रेलरको सुरुवातको डाइलग्समा नायिकाले डेढ महिनादेखि रोकिएको नायकलाई सुनाउदै तनाब भएको बताएकी छन् । ... बाँकी अंश»
यी देशका राष्ट्रपतिले सुत्नका लागि त्यागे आसियान शिखर सम्मेलन
२०७५ मङ्सिर २१ शुक्रबार, काठमाडौं । फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्ते सिंगापुरमा भएको आसियान शिखर सम्मेलन र ईस्ट एशिया समिटमा भाग लिएका थिए । आसियान शिखर सम्मेलनमा भएका केहि बैठकमा भने फिलिपिन्स राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्तेले सहभागि भएनन् । सो क्रममा उनि 'पावर नेप' (दिमागलाई ताजा गर्ने कम अवधिको निन्द्रा) लिइ रहेको राष्ट्रपति कार्यालयले जानकारी दिएको थियो । ... बाँकी अंश»
२०७५ मङ्सिर २१ शुक्रबार, काठमाडौं । एकै परिवारमा इन्जीनियर, डाक्टर, राजनीतिज्ञ वा कलाकार त सुनेकै कुरा हो तर परिवारका सबै सदस्य विमान चालक हुनु अचम्म लाग्न सक्छ । यो परिवारको तीन पुस्त देखि पाइलट बन्दै आएका छन् । हजुरबुबा देखि लिएर नाती- नातिना र उनका सबै सन्तान विमान चालक छन् । पाइलटको कपडा यो परिवारको पहिचान बनेको छ । उनीहरूको रगतमा-रगतमा विमान चलाउने विशेषता रहेको विश्वास गरिन्छ । ... बाँकी अंश»
हुवावेकी उपाध्यक्ष पक्राउ
२०७५ मङ्सिर २० बिहिबार, काठमाडौं । चीनको स्मार्टफोन कम्पनी हुवावेको उपाध्यक्ष तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी मेङ्ग वाङ्गझूलाई पक्राउ गरिएको छ । उनलाई १ डिसेम्बरमा क्यानडाको वेन्कोयवरमा पक्राउ गरिएको हो । ... बाँकी अंश»
२०७५ मङ्सिर २० बिहिबार, काठमाडौं । राष्ट्रिय हवाई यातायात तथा अन्तरिक्ष प्रशासन (नासा) मा संस्कृत सिक्ने काम भै रहेको बताइएको छ । नासमा रहेको एक रिसर्च टीम संस्कृतको सागरमाबाट नयाँ खोजको सुरुवात गर्न गैरहेका छन् । उनिहरु संस्कृतबाट अरु केहि विकास गर्न सकिन्छ कि भन्नेमा अध्ययन गरिरहेका छन् । ... बाँकी अंश»
भारतमा खुल्ला दिशा पिसाब रोक्न ट्रम्पको नाममा अभियान
२०७५ मङ्सिर २० बिहिबार, काठमाडौं । भारतको गाँउ-गाँउमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नाममा अभियान चलाइएको छ। ट्रम्पको नाममा खुल्ला दिशा पिसाब मुक्ति अभियान चलाइएको हो । ... बाँकी अंश»
यो ११ करोडको लुगामा के छ ?
२०७५ मङ्सिर २० बिहिबार, काठमाडौं । चर्चीत हलिउड मोडल एल्सा होस्कले हालै र्‍याप वर्कमा आफ्नो कामुक प्रदर्शन गरेकी छन् । केहि दिन पहिले हलिउडको फेशन शो मा एल्सा होस्कले निकै महंगो बिकिनी लगाएर क्याट वर्क गरेकी थिइन् । जुन देखेर मानिसको होश उड्यो । सिल्भर कलरको सो बिकनीमा महंगो हिरा लगाइएको थियो । ... बाँकी अंश»
२०७५ मङ्सिर १९ बुधबार, काठमाडौं । चर्चीत हलिउड मोडल एल्सा होस्कले हालै र्‍याप वर्कमा आफ्नो कामुक प्रदर्शन गरेकी छन् । केहि दिन पहिले हलिउडको फेशन शो मा एल्सा होस्कले निकै महंगो बिकिनी लगाएर क्याट वर्क गरेकी थिइन् । जुन देखेर मानिसको होश उड्यो । सिल्भर कलरको सो बिकनीमा महंगो हिरा लगाइएको थियो । ... बाँकी अंश»
विवाहमा हात्ती र घोडाहरुमाथि क्रूरता प्रदर्शन गरेको प्रियंकामाथि आरोप
२०७५ मङ्सिर १९ बुधबार, काठमाडौं । जनावरहरुको संरक्षणका लागि काम गरिरहेको संगठन पेटाले उनीहरुको विवाहमा जनावरहरुलाई प्रताडित गरिएको आरोप लगाएको छ । पेटाले जनावरहरुमाथि उनीहरुको विवाहमा क्रूरता प्रदर्शन गरिएको उल्लेख गरिएको छ । पेटाले विवाहमा हात्ती तथा घोडाहरुमाथि क्रूरता प्रदर्शन गरिएको भन्दै आलोचना गरेको छ । ... बाँकी अंश»
प्रियंकालाई सासुको यस्तो उपहार
२०७५ मङ्सिर १८ मंगलबार, काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा जोनस परिवारकी बुहारी बनेकी छन् । प्रियंका चोपडा र निक जोनस श्रीमान् - श्रीमति बनेका हुन् । प्रियंका- निकको विवाह क्रिश्चियन रीतिरिवाजअनुसार शनिबार भारतस्थित जोधपुरको उम्मेद भवनमा भएको थियो भने आइतबार उनीहरुको हिन्दू रीतिरिवाज अनुसार बिहे भयो । यो हाइप्रोफाइल बिहेको फोटोग्राफ राइट्स करीब साढे दुई मिलियन डलरको रहेको थियो । ... बाँकी अंश»
यी बलिउड चलचित्र माथि किन लगाइयो प्रदर्शनमा रोक ?
२०७५ मङ्सिर १८ मंगलबार, काठमाडौं । बलिउडमा चलचित्र र विवादको सम्बन्ध पुरानो नै हो । हालै सञ्जय लीला भन्सालीको चलचित्र पद्मावतले चलचित्र क्षेत्रमा तहल्का पिट्यो । विवादपछि चलचित्र ‘ पद्मावत’ रिलज भयो । बलिउडमा पद्मावत जस्तै थुप्रै चलचित्रहरू छन् जो विवादको कारण गर्दा सेन्सर बोर्डले रिलिज गर्न अनुमति दिएको थिएन् । साथै कति चलचित्रलाई रिलिज पछि प्रतिबन्ध समेत लगाइएको थियो । ... बाँकी अंश»
व्यवसायभन्दा पनि यी काममा अगाडि छिन् अम्बानी परिवारकी बुहारी
२०७५ मङ्सिर १७ सोमबार, काठमाडौं । भारतीय अर्बपति मुकेश अम्बानीका छोरा तथा जियो टेलिकमका प्रमुख आकाश अम्दानीको विवाहको तयारी चलिरहेको छ । ... बाँकी अंश»
२०७५ मङ्सिर १७ सोमबार, काठमाडौं । कफी विश्वको सबैभन्दा बढी पिइने पेय पदार्थमध्येको एक हो । कफीलाई धनी मानिसहरुको पेय पदार्थको रुपमा पनि बुझ्ने गरिन्छ । यस्तोमा कफीको पनि विभिन्न किसिमको मूल्य हुने गरेको छ । यस्तोमा सबैभन्दा महँगो कफीको अनुमानित मूल्य ११५० डलर प्रतिकिलोग्राम रहेको छ । ... बाँकी अंश»
जानी राखौ, कुन भाषामा कसरी गरिन्छ प्रेमको प्रस्ताव
२०७५ मङ्सिर १७ सोमबार, काठमाडौं । भाषा मनको कुरा कसैका सामु पोख्ने माध्यम हो । यस्तोमा मनको कुरा व्यक्त गर्दा कुन भाषाको प्रयोग गर्‍यो भन्ने कुरा खासै मतलबको विषय होइन । त्यसमा पनि अझ प्रेम यस्तो विषय हो जसमा धेरै कुरा भन्नुभन्दा पहिला नै थाहा हुन्छ । ... बाँकी अंश»
प्रियंकाको विवाहमा परिणीतिको भावनात्मक नोट
२०७५ मङ्सिर १७ सोमबार, काठमाडौं । प्रियंका चोपडाको अमेरिकी गायक निक जोनससँग विवाहलाई लिएर अभिनेत्री परिणीती चोपडाले एक भावनात्मक नोट पनि लेखेकी छन् । काकाकी छोरी प्रियंका चोपडालाई लिएर परिणीती चोपडा निकै खुशी रहेकी छन् । ... बाँकी अंश»